Francisco García Pavón. Centennial naPlinio uye mazwi muRuidera | Zvazvino Zvinyorwa
Katuni pane chiuno chebhuku Manzwi muRuidera. Kubva kuMingote neCabañas.
Gore rino ndiyo makore zana ekuberekwa kubva kumunyori tomellosero Francisco Garcia Pavon, uyewo makore makumi matatu ekufa kwake. Ini ndiri manchega yakachena, ndakagara hudiki hwangu muTomelloso uye García Pavón inzvimbo yakatenderedza pano.
Ndakatotaura rimwe zuva rechisikwa chake chakakurumbira, mukuru weGMT (Tomelloso Municipal Guard), isingaenzaniswe Manuel Gonzalez, Pliny kune nyika inozivikanwa. Nhasi ndinorangarira idzi ephemeris ne ongorora de Manzwi muRuidera, rimwe remabhuku ake chinotyisa zvikuru, chinonakidza uye chine nharo izvo zvandinokurudzira kutsvaga.
1 Manzwi muRuidera
1.1 Plinio nemhuri yake
1.2 Mamwe mavara
Commissioner Anselmo Perales, weMadrid Criminal Investigation Brigade, kuonana na waaishanda naye uye shamwari Manuel González alias Pliny kukupa komisheni. Inofanira enda incognito kune maRuidera lagoons kubatana pa inoshamisa nyika yese kesi zvine chekuita nekutapa.
Saka panoenda Pliny, chimwe chinhu kunyara yekutumwa kwekuvanzika kukuru uye kwazvisingakwanise kutaura nezvazvo. Chikonzero chaanoita ndechekuti zororo nemhuri yako. Pane zvekare chimwe chikonzero: icho che tsvaga kumwe kuchema kunotyisa izvo zvinonzwika pakati pehusiku padyo nemadhamu uye izvo zvakachinja munhu wese akatenderedza.
Ndiyo novel zvimwe cervantina yesaga. Yakagadzirirwa mukati mamiriro avo vanoramba vachiyemura chero munhu anopfuura nepano penyika yakaoma uye yakaoma. Zvinoshamisika, mukuwedzera uye pamusoro pezvose, kune imwe kunyatsojekesa zvepabonde ane mugumo unoitika mu kuguma kunotyisa iyo muzuva rayo yakashamisa vanoongorora.
Uye chii chisiri kushomeka ndicho hupfumi hwemutauro naGarcía Pavón, nyanzvi mukuratidzira, kutsanangura uye kurondedzera nezve La Mancha idiosyncrasy. Chiitiko nezve kubvunzana (uye nezvaanobvunza) zvaPlinio naDon Lotario de Ignacio, achangoroora ane matambudziko "ekusangana" nemukadzi wake, haakanganwike. Kujeka, kwete nyore, kuseka, kudzoka uye kutaura kwenzvimbo kune avo vedu vanobva pasi. Nechikonzero ichocho chega, zvakakodzera kuti vazviverengere ivo vega uye neavo vari kunze kwechinhu ichi chakanyanya.
Plinio nemhuri yake
Iyo inoverengeka uko kwakawanda protagonism ine mukadzi wake Gregoria nemwanasikana wake Alfonsa, kazhinji kazhinji sekondari mune mamwe mazita. Ivo vanokuperekedza mune mweya wakanaka, kunyangwe ivo vachiziva kuti inyaya yekufungidzira kwenyaya itsva. Asi izvi zvakare zvekunyepedzera kwemamwe akanakisa ndima mundove, senge iri pazasi.
Iko hakuna kushaikwa kweanowanzoitika akafanana Don Lotario, akagadzirira chero nguva kune iyo "kubvunza" kweshamwari yake Plinio, chiremba Watson manchego uye chiremba wemhuka. Zvinoonekwawo ipapo Cape Weed, wechipiri kuna Pliny, uye lAntonio the Pharaoh naBraulio muzivi vanogara vachiba zviitiko, mumwe weavo vatambi vane maitiro avo asingadzokorore. Kune zvakare Don Ricardo, mudzidzisi wepachikoro chepamusoro. Uye vese vanoendawo kuRuidera kunoona kuti Plinio ari sei.
Hunhu kongiri zvebhuku rino ndizvo hure Gala (kusarudza mukugadziriswa kwenyaya yacho), Don Circumciso uye imbwa yake Vida (ndiani asiri ivo vanoratidzika), Hama Cold rwizi o iye García López (amai nemwanakomana vanogara munzvimbo iyi vanowanzo famba nguva nenguva).
«Sezvo vakadzi vacho vaienderera mberi, akatanga kucherechedza mwanasikana wake. Akafamba akatsamira ruoko rwaamai vake, achivaudza zvinhu, achiseka dzimwe nguva uye achifambisa makumbo ake akasimba zvine mutinhimira. Zvinoshamisa sei kuva nemwana. Izvo, nekuda kwekukakavadzana kwemaviri mukati mehusiku humwe hwehusiku, muviri mudiki uchangobva kugadzirwa uye unodziya, homwe yemasimba mazhinji kubva kuvabereki, vanasekuru, penta-sekuru, nevane makore zana, yakabuda muna amai pakati pekugomera kwavo. , yakanga isingawanzoitiki. Ikoko ivo vaive nazvo, mutorwa uye saka weumwe; saka hongu uye saka zvedu; asiwo nezvevamwe ».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Francisco García Pavón. Centennial naPlinio uye mazwi muRuidera